फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - चम्चा–धर्म
चम्चा–धर्म मुकुन्द आचार्य
कुबेरको गरीब पार्टी प्रचार प्रसारको क्रममा एक दिन झुक्किएर म गरीबकोमा आइपुग्यो । आजीवन कमाएर स्वयम् हरियो वटवृक्ष भैसकेका रिटायर्ड महापुरुषहरू मिलेर रचिएको उक्त हरियो पार्टीका नेताहरू आफ्नो हरियाली लुकाउँदै गरीबको भेषमा घुम्दै थिए । ठिकै हो, आफू हरियो नभैकन देशवासीलाई हरियालीको सपना कसरी बाँड्ने ? बुद्ध नबनी अरुलाई कसरी बुद्धु बनाउने ?
अतिथि सत्कारको आर्य परम्परालाई नष्ट गर्नुभन्दा त खाजै ख्वाउनुमा केही नष्ट गर्नु बेश होला भन्ठानेर मैले पाँच–सात जनाको सो डफ्फालाई चिया चमेना गराउने बाध्यता अनुुभव गरें । खाजा खाजे क्रममा चम्चाको चर्चा चल्यो । ‘नेताहरूलाई चम्चा किन चाहिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न त्यहाँ जन्म्यो । सदनमा विधेयक जन्मे जस्तै ।
मैले लाटोबुङ्गोको लाठो चलाएँ, रामायणमा हनुमानजीलाई बानरी सेनाले उनको शक्तिबोध गराएका थिए । अनि मात्र हनुमानले आफूलाई चिने । त्यसैगरी नेताहरूलाई ‘हजुर त यस्तो जान्ने उस्तो जान्ने, यस्तो गर्न सक्ने उस्तो गर्न सक्ने, भनेर बारम्बार फुक्र्याएर सचेत पार्ने काम उनका चम्चाहरूले नै गर्छन् । प्राचीन नाटकहरूमा पनि यस्ता विदूषकहरू हुन्थे जसले नायकलाई लक्ष्यसम्म पु¥याउन मद्दत गर्थे । अचेलको फिल्ममा जोकरको भूमिका पनि मूलतः चम्चा धर्म नै हो ।
मेरो भनाईमा चित्त नबुझेर हो कि, उनीहरूले चाँडै नै मेरो कुटीबाट प्रस्थान गरे ।